Imaaraadka oo dib u soo celiyay Xoolo laga dhoofiyey Somaliland – Radio Baidoa
Dekadda Magaalada berbera ee Soomaaliland ayaa waxaa kusoo xiratay dooni sida xoolo farabadan oo laga soo celiyey wadanka Imaaraadka Carabta oo markii hore loo dhoofiyey.
Doontaas oo dabayaaqadii Bishii la soo dhaafay ee Febaraayo Dekadda Magaalada Berbera ka qaadey Afar kun iyo lix boqol oo neef ayaa Berbera kusoo celisay Saddex kun oo neef oo ari ah, halka ay kun iyo Shan boqol oo Neef ay ku dhex dhinteen doonida intii ay u xayirnaayeen aqbalaada Imaaraadka.
Weli Imaaraadka Carabta ma shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeeysa in Doonida siday Xoolaha faraha badan ee laga dhoofiyey dekadda Magaalada Berbera ay dib u soo celiyaan,waxana la sheegay in xoolahaas ay ahaayeen kuwo maray tijaabo Caafimaad.
Warar madax bannaan oo soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in sababaha Imaaraadka Carabta uu dib ugu soo celiyey Doonta Dekadda Berbera xoolaha ka qaadey ay tahay in aan la siin wax ogolaansho ahw,waxaana arrintaan walaac ka muujiyey Ganacsatadii laheyd Xoolaha.
Si kastaba Majirto weli wax war ah oo ay Xukuumada Somaliland kasoo saartay xoolaha dib loogu soo celiyay dekedda Berbera,waxaana doontaas haatan bilaawdey in laga dejiyo Xoolaha saaran.
IAEA oo eedeysay Dowladda Iiraan